Izindaba - Umlando wokukhiqiza ithubhu engenamthungo
Ipayipi lensimbi eligoqiwe elishisayo elishisayo
Precision steel ipayipi
Ingxubevange yensimbi ipayipi
Ingxubevange ipuleti lensimbi
Square steel ipayipi
Unxande ipayipi lensimbi
Imbiza yembali yeCorten
Isikrini sensimbi seCorten
Gqoka ipuleti lensimbi elingazweli
Umlando wokukhiqiza we-tube ongenamthungo
Ngawo-1960 ngenxa yokwakhiwa kwesigayo esisha esinezintathu eziphakeme (esaziwa njengeTransval mill), lezi zindlela zithuthuke ngokushesha.Umshini omusha ubonakala ngokuzungeza ngokushesha itheku kuya ngemuva indawo yokujika iza ukuguqula i-Angle egingqikayo, ngaleyo ndlela ivimbela umsila ekwakheni onxantathu abenza uhlobo lokukhiqiza isilinganiso sobubanzi obungaphandle nobukhulu bodonga sandisiwe kusuka ku-12 kuye ku-35, ongeke nje ukhiqize amashubhu anezindonga ezincanyana, kepha futhi kuthuthukise namandla wokukhiqiza.
Indlela yendabuko yokufaka ipayipi ukuthi i-billet iqhutshwa ingcindezi yamanzi futhi yelulwa ibe woboya bezinkomishi ngepayipi lokugoqa lapho kufakwa khona i-mandrel ende ezansi kwenkomishi ye-capillary ngenduku yokucindezela futhi yehliswe ngokuqhubekayo ngochungechunge lwezimbobo uhlobo oluncane lohlobo lokufa, phezulu kufakwe kuma-tubes.Lolu hlobo lwendlela yokukhiqiza lunotshalo oluncane emishini futhi lungasetshenziselwa ukwenza i-billet eqhubekayo, ingaveza ububanzi obufinyelela ku-1070mm, ubukhulu bodonga bube ngu-200mm wepayipi elithe xaxa, kepha ukusebenza kahle kokukhiqiza okuncane, udonga olujiyile, ubude obufushane bepayipi kunokusebenza kahle.Ngemva kokuvela kwenqubo entsha ye-CPE, amashubhu angenalutho agqobhoza ngokugingqika okunwetshiwe futhi enwetshelwa kumashubhu ngokugingqa okuphezulu ngemuva kokuvala, okunqoba indlela yendabuko.
Okunye ukushiyeka kokukhiqizwa kwamapayipi angenamthungo sekuyindlela engcono yezinzuzo zezomnotho.
Ekukhiqizweni kwamapayipi we-extrusion, i-billet eyindilinga ehlutshiwe iqale igcotshwe noma yenziwe kabusha bese ishiswa ngokungeniswa okugeza usawoti kuyashiswa, futhi ingaphakathi ligoqwe i-lubricant bese ifakwa ku-extruder, ngembobo yokufa nangensimbi igebe le-annular phakathi kwe-mandrel kufinywa kumashubhu ensimbi.
Isetshenziselwa ikakhulukazi ukukhiqizwa kwamapayipi aphansi epulasitiki, amapayipi akhethekile, amapayipi ahlanganisiwe namashubhu anemibala amapayipi wensimbi, njll. Le ndlela inezinhlobonhlobo zokukhiqiza, kepha isivuno esiphansi Eminyakeni yamuva nje, ngenxa yezinto zokwakha isikhunta, izinto zokuthambisa, isivinini se-extrusion nokunye kuthuthukisiwe, ukukhiqizwa kwamapayipi we-extrusion nakho sekuthuthukile.
Umhubhe we-coil rolling tube ubizwa nangokuthi i-Diessel perforated capillary tube enezinsimbi ezinde zensimbi ezincanyana zodonga ezigoqwayo esigayweni sepuleti yomhlahlandlela.Isigayo sifana nesibhakela sokugoqa esiphakeme esiphindwe kabili ngaphandle kwepuleti yomhlahlandlela ohleliwe siguqulwa saba ipuleti yomhlahlandlela osebenzayo Njengoba ukukhiqizwa kwe-mandrel ende, insimbi yensimbi yangaphakathi yangaphakathi ibushelelezi, futhi akukho nokuklwebheka; Kodwa izindleko zamathuluzi zikhulu, lungisa i-complex.It isetshenziselwa ikakhulukazi ukukhiqiza amashubhu wensimbi engamakhilomitha ayi-150mm alandelayo e-USES.At ejwayelekile, akuvamile ukuba isetshenziswe futhi ayinathemba elikhulu lentuthuko.
Ukukhiqizwa kweshubhu okujikelezayo kuzoba kufulethi noma kungenalutho okungenalutho emshinini wokuphotha ngomunye noma ngaphezulu kokuphotha okwenziwe ngepayipi lensimbi elincanyana.ukucacisa okuphezulu, izakhiwo ezinhle zomshini, ubukhulu obuningi, kepha ukusebenza kahle kokukhiqiza kuphansi. Amapayipi wensimbi anensimbi, kepha futhi asetshenziswa kakhulu ekukhiqizeni.
Ngaphandle kwensimbi yasendlini, iziqukathi zamakhemikhali nezingxenye zemishini, ezisetshenziswa kakhulu embonini yezempi.
Ngawo-1970, ukusebenzisa indlela eqinile yokuphotha ikwazile ukukhiqiza ububanzi bepayipi obufinyelela ku-6000mm, ubukhulu nodonga ubukhulu ubukhulu bamapayipi amakhulu angaphezu kuka-10000 ubukhulu namapayipi afakwe kahle.
Ukugoqa okubandayo, ukukhiqizwa komdwebo obandayo wokukhiqiza udonga oluncane lobubanzi obuncane, izici zokukhiqiza zensimbi ezenziwe ngobuciko ezikhethekile ezinjengezinqubo eziningi zomjikelezo wenqubo.
Ngawo-1960, yaqala ukuthuthuka isiya ngejubane elikhulu, ulayini omningi, unhlangothi omude kanye noshubhu omude ongenalutho.Ngaphezu kwalokho, kuye kwasungulwa umshini wokugaya amapayipi omncane obandayo, osetshenziselwa ukukhiqiza ipayipi lensimbi lokunemba elincanyana ngokwedlulele ngobukhulu bodonga ngaphansi kuka-1mm. Imishini yokugoqa ebandayo iyinkimbinkimbi, ukucubungula ithuluzi kunzima, futhi ukuguqulwa okuhlukahlukene nokucaciswa akuguquguquki. Inqubo ehlangene yokugoqa okubandayo nokudweba okubandayo kuvame ukwamukelwa, okusho ukuthi, udonga luqala lancishiswe ngokugodola okubandayo ukuthola ukuthambeka okukhulu, bese kutholakala izinhlobo ezahlukahlukene zokulinganisa nge-lattice ebandayo yokudweba.
Isikhathi Iposi: Nov-23-2020
Isitezi se-17, i-Xingmei Building, isifundazwe saseLiaocheng Shandong, eChina.
umphathi @ hongyi material.com